Olan’ny fandraharahana eto Madagasikara Manampy trotraka ny ataon’ny fadin-tseranana
Misedra olana goavana ny sehatra fandraharahana hoy i Randriamampionona Joseph Martin na i Dadafara amin’izao fotoana izao.
Fifandraisana ara-toekarena maneran-tany Tokony hahay maka tombontsoa i Madagasikara
Tsy maintsy mahay mifandray amin’ireo firenena avy any ivelany i Madagasikara, indrindra ny amin’izao fotoanan’ny fanatontoloana izao.
Kaominina Ampitatafika Hisy fananganana orinasa maromaro ato ho ato
Nanana olana hatrany ny kaominina Ampitatafika hatramin’izay noho ny fitohanana mampalaza ity faritra ity ka tsy mahasarika ireo mpandraharaha hampiasa ny volany eny an-toerana.
Orinasa Malagasy Salone sy Somacou Nankasitraka ny fanapahan-kevitry ny ANMCC
Ny vokatry ny fandalinan’ny rafitra mpanao fanadihadiana amin’ny lalàna momban’ny fifaninanana (ANMCC) dia namoaka ny taha fanatataovana haban-tseranana ho an’ny fanafarana paty, savony ary bodofotsy avy any ivelany izy ireo.
Fianarantsoa Azo hanaingana ny toekaren’i Madagasikara
Nifaly havanja sy nitotorebika ary nikorana ireo zanaky ny faritra dimy dia Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony ary Amoron’i Mania izay mandrafitra ny faritanin’i Fianarantsoa tamin’ny faran’ny herinandro teo tetsy amin’ny Espace Myrah Ambatomaro.
Paty, savony, bodofotsy avy any ivelany Hotataovana haban-tseranana
Hanomboka ny talata 15 janoary ho avy izao dia hotataovana haban-tseranana ny fanafarana paty, savony ary ny bodofotsy avy any ivelany, hoy ny rafitra mpanao fanadihadiana amin’ny lalàna momba ny fifaninanana (ANMCC) tamin’ny sabotsy 12 janoary lasa teo tetsy amin’ny foiben-toerany Antanimena.
Fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara Ilàna mpitondra feno fahasahiana
Nanambara ireo tanora mivondrona ao amin’ny vovonana iraisan’ny fikambanana silamo fa raha tiana ho tojo fampandrosoana haingana i Madagasikara dia tsy maintsy manana fahasahiana amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ny mpitondra.
29% monja ny Malagasy tafiditra amin’io rafitra io tamin’ny taona 2016 ka tanjona hotratrarina ny hahatonga izany ho 45% ny taona 2022. Olana ny tsy fahampian’ny fanentanana ny olona hiditra anatin’ny rafitra mpampindram-bola, indrindra eny amin’ny tontolo ambanivohitra ka tsy ahafahany misitraka ireo tolotra maro isan-karazany manodidina izany. Tsy ampy ihany koa ny fanabeazana mahakasika ny ara-bola (éducation finançière) ka mahatonga ny Malagasy tsy hahafantatra ny tombon’ny tolotra rehetra misy amin’ny fandraharahana ara-bola. Nampahafantarina tamin’ity atrikasa ity fa tsy mampirisika fotsiny ny olona hampiasa vola ny fanabeazana ara-bola fa mampianatra mihitsy ny amin’ny fitantanana rehefa hanao fandraharahana ara-bola. Eo ihany koa ny tetikady fampahalalana ny zony manodidiana ny fandraharahana izay tokony hohatsaraina hatrany eto Madagasikara, indrindra manoloana ny fivoaran’ny teknolojia. Ilaina mihitsy ny sehatra fampahafantarana tahaka itony satria misy ny fahasahiranana eo amin’ny fampiasam-bola raha tsy manaraka ny fandrindrana momba ny fikirakirana ara-bola izay ampitaina amin’ny sehatra tahaka izao. Tsy afaka miala amin’ny findramam-bola ny Malagasy satria io no fomba entina hampiroboroboana ny asa atao hitadiavana tombony sy entina hanaovana fandraharahana hahasalama ny toekarena.